ओइलिएको पुष्पकमल र निस्तेज प्रचण्ड | चितवन पोष्ट
‘इतिहास अपराध र दुर्घटनाहरुको फेहरिस्तमात्रै हो’– फ्रेञ्च दार्शनिक भोल्टेयरको यो मह¤वपूर्ण भनाइ नेपाली जनताले कण्ठ गर्नुपर्ने भइसकेको छ । जनताले इतिहासको रुपमा गर्व गर्न पाइन्छ कि भन्ने ठानेका इतिहासहरु क्रमशः अपराध र दुर्घटनाहरुको फेहरिस्तमा साबित हुँदै गइरहेका छन् । अर्का जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिख नित्सेले भनेजस्तो स्मारकीय (मनुमेन्टल) इतिहास जो महान् क्षण र महान् घटनाहरुको सङ्ग्रह हो, त्यसरी नै नेपाली राजनीतिको समय बित्दै जाँदा दुर्घटनाग्रस्त हुँदै गइरहेको छ । ती सुन्दर राजनीतिक, ऐतिहासिक घटनाहरु पौराणिक (एन्टिक्युरियन) इतिहासको अस्तित्वमा रहेर मानवता सुचारूको रूपमा रहन सकेन ।
दशकौँसम्म कठोर राजनीतिक जीवन गुजारेर सुपर म्यानको रुपमा उच्चतम चेतनाले सिर्जित वास्तविक र सिर्जनशील इतिहास कायम गर्न खोजेका प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) भूत र वर्तमानको चित्त बुझाउन नसक्ने हबिगतमा पुगेका छन् । उनैले भनेका महान् जनयुद्धको इतिहासमाथि तेजाब खन्याउने काम उनैबाट भएको छ । प्रचण्ड जनयुद्धको नेतृत्वकालसम्म आइपुग्दा क्रान्तिकारी हिरो थिए भन्नेमा प्रश्न थिएन । उनले नेपाली जनता र विशेषगरी सर्वहारा, सुकुमबासी, किसान, मजदुर, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम तथा सबै खालका वर्गीय, लिङ्गीय, जातीय र क्षेत्रीयरुपमा उत्पीडितहरुबाट अति सहानुभूति पाएका पनि हुन् । उनले क्रान्तिकारी हिरोको सर्वोत्तम भूमिका निभाएका पनि छन् । २०७४ सालको अन्तिमसम्मको उनको राजनीतिक जीवन सम्मानित र अस्तित्ववान् नै रहेको थियो, तर आफ्नो इतिहासको विरासत जलाउने काम २०७५ सालको जेठबाट एमालेसँग पार्टी मिसाएर गरे । अहिलेसम्म आइपुग्दा आफ्नै नेतृत्वमा कायम गरेका महान ऐतिहासिक गौरवलाई कमजोर पार्ने काम आफैँले गर्दैछन् ।
के भनेर प्रचण्डले जनयुद्ध सुरू गरेका थिए ? कुन उद्देश्यले जनयुद्ध गरे ? नेपाली जनतालाई कस्ता–कस्ता सपना बाँडेका थिए ? र के प्राप्त भएपछि टुङ्ग्याएर आफ्नो गौरवमय इतिहास पुर्नतिर लागे ? सबैले बुझिसकेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँशक्ति खोल्दा ‘कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर भागे’ भनेका प्रचण्ड स्वयम् आपूmले पनि कम्युनिस्ट पार्टी छाडेर भागे । यद्यपि, कार्यकर्ता भुलाउन र इज्जत देखाउन एमालेसँगको एकतामा कम्युनिस्ट एकता गरे भनेका थिए । प्रचण्डले कम्युनिस्ट एमालेसँग एकता गरे भन्नु हास्यास्पदमात्रै हो । उनले कम्युनिस्ट एकता गरेको हो भने मोहन वैद्य, मोहनविक्रम, विप्लव, गोपाल किराँती, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वलगायतका पार्टीसँग पो गर्नु पर्दथ्यो । आफैँले भन्दै आएका प्रतिक्रियावादी पार्टी एमाले, कांग्रेसजस्तासँग एकता गरेर कम्युनिस्ट एकता कसरी हुन्छ !
‘बिसौँ शताब्दीको अन्तिमतिर आएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने र पुँजीवादी बुर्जुवा जनवादमा पतन गराउने कार्य यिनै दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुले गरेको कुरा स्वतः प्रस्ट छ । यहाँ प्रक्रियामा नै एमालेको बहुदलीय जनवादले आर्थिकरुपमा सुधारवादको, वैचारिक तरिकाले विसर्जनवादको र दार्शनिकरुपमा शून्यवादको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।’ यो भनाइ २०६३ साल आश्विनमा नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनद्वारा प्रकाशित ‘नयाँ दिशाबोध’मा कमरेड प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति हो, जो सार्वजनिकरुपमा सधैँ भन्दै आएकै हुन् । त्यसो हो भने २०७५ सालमा आइपुग्दा उनको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेसँग एकता गर्दा एमाले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टमा रुपान्तरण भएको हो त ? प्रचण्डले यो प्रश्नको उत्तर अहिले के देलान् ? उत्तर पक्कै छैन । अब प्रचण्ड आफैँ सुधारवाद, विसर्जनवाद र शून्यवादको भुमरीमा फनफनी घुमिरहेका छन्, जसको निकास छैन ।
‘काग बाठो भएपछि के खान्छ’ भनेजस्तो बढी क्रान्तिकारी बाठो हुन खोज्दा अस्तित्वमै धमिरा लागिसकेको छ । क्रान्तिकारी युद्धबाट थाकेर (भगुवावादी) पलायनको नीति र मार्ग अवलम्बन गरेका प्रचण्ड आपूm र निश्चित घेराको स्वार्थको पराकाष्ठास्वरुप कहिले कांग्रेस, राप्रपासँग चुनावी तालमेल त कहिले एमालेसँग पार्टी मिलानमा विलुप्त भए । आपूmले भन्दै आएका विभिन्न कालखण्डमा आपूm प्रवेश गरेका पार्टीमा पुरानो भङ्ग भएको अवस्था र नयाँ–नयाँमा आफ्नो नेतृत्वको सपना एमालेसँग एकतापछि विफल हुने भइसकेको छ । एमालेसँग एकतासम्म आइपुग्दा उत्तर आधुनिकतावादी चेतनाको प्रवाह (स्ट्रिम अफ कन्ससनेस) माइन्डले ग्रसित थिए उनी । यसको मतलब एकै समयमा बहुसपना वा बहुविषयहरु दिमागमा खाँदिएर आउने हुँदा संसदीय सपना, ठूलो पार्टी बन्ने र ठूलै पार्टीको नेता बन्ने इच्छा, प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा आदि आदिका चेतनाको प्रवाहका कारण नेकपामा परिणत भइहाले । तर, उनले जति सुनौलो अवसर सोचेका थिए त्यति बढी चुनौती छ । ‘चौटा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी” भन्ने कुरा व्यहोर्दै छन् । एमालेलाई कम्युनिस्ट मानेर भएको एकताको नामबाट नेकपाको सहअध्यक्ष पद उनका लागि फलामको चिउरा भएको छ । प्रचण्ड एमालेमा ओली, माधव, झलनाथको फुटबल बन्नुपर्ने बाध्यता छ । एमालेमा माओवादी केन्द्र जोडिएको नेकपा नामको दलभित्र पुरानो एमालेको आन्तरिक द्वन्द्व पहलुको प्रयोगमा प्रचण्ड रूमल्लिनु परेको छ । माधव, झलनाथ र वामदेव गुटले उनलाई प्रयोग गर्ने र ओली गुटविरूद्ध हतियार काँधमा थम्याइदिने अभ्यासको बन्धनमा छन् उनी । कुनै बेला सबैलाई आदेश पालना गराउने सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड अहिले अर्काको आदेशपालकका रुपमा प्रकट भएका छन् ।
ग्रीक पौराणिक दुःखान्त नाटकका पिता इक्किलसको दुःखान्त नाटक ‘अगामेम्नन’का दुखान्त हिरो दस वर्ष स्पार्टा युद्धको कमान्डरका रुपमा सक्रिय लडाइँ लडे, तर युद्धबाट घर फर्केपछि आफ्नै श्रीमतीबाट उनी समाप्त हुनु परेको थियो । त्यही ‘अगामेम्नन’जस्तै आफ्नै कारण र आफ्नै नातावाद र क्रियावादकै कारण पतन भएका छन् प्रचण्ड । ‘संसद् खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भन्ने प्रचण्ड अहिले भटाभट कुकुरका मासु बेच्दैछन् । नेपाली राजनीतिक बजारमा नक्कली व्यापारी बनेर क्रान्तिकारी छवि समाप्त पार्दैछन् ।
उनी कम्युनिस्टले विश्वासै नगर्ने र गर्न नै नहुने बुर्जुवा लोकतन्त्र र यसभित्रको बहुमत अनि अल्पमतको निर्धारणमा फसेका छन् । माधव नेपाल र झलनाथ गुटको भर पाए अल्लि कस्सिएर भुक्छन् र उनीहरुको आड नपाउँदा ओलीसँग लत्रने गरेका प्रचण्डलाई भोलि एमालेभित्रकै गुटहरु मिलेर तेलपानीसँगै पिनाबाहिरको पिना पक्कै बनाइने छ । भावनात्मक कुरै छाडौँ, वस्तुगत वा भौतिकरूपमै नजुटेको नेकपा पुनः फुटेर नयाँ टुक्राहरुको रुपमा उछिट्टिँदै छ । अहिले गुटबन्दी वा दलबन्दीमा समेत क्याम्प परिवर्तन भएको छ । हिजोका पूर्वएमाओवादीमा प्रचण्डका रक्तसञ्चार र बलियो आधार मानिएका लेखराज भट्ट, बादल, टोपबहादुर रायमाझीलगायतकाहरु आज ओली कयाम्पमा आड लागेका छन् । प्रचण्ड क्रान्तिकारी नरहेर ओलीसँगको एउटै स्वरुप र विशेषताको भइसकेपछि र आखिर खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरकै मासु व्यापारी हुने संसद्वादी भइसकेपछि उनीहरु प्रचण्डलाई किन नछाडून् ? आखिर मुख्य साहू ओलीतिरै लागेपछि धेरै नाफा हुने भयो । बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको घिनलाग्दो विशेषता नै यही हो । यदि अपवाद भयो र महाधिवेशनसम्म गयो भने पनि उनले भन्ने गरेको सुधारवाद, विसर्जनवाद र शून्यवाद बोकेको बहुदलीय जनवादको खाए खा नखाए घिचको स्थितिमा टुक्रे नेता बन्नेछन् ।
तत्कालीन सशस्त्र युद्धले विजय प्राप्त गर्दागर्दै उनीहरुले भन्ने गरेको नेपाली क्रान्तिले विश्वलाई नेतृत्व गरेको र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै नेतृत्व प्रदान गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी एमाओवादी थियो । विश्व राजनीतिक इतिहासमा प्रभावशाली भएर स्थान लिएको त्यो क्रान्तिकारी पार्टीलाई विश्व इतिहासले अहिले खोजिरहेको छ । २०५२ देखि २०७४ सालसम्मको बाइस वर्षमात्रै हो त्यो पार्टीको आयु ? विश्व हल्लाएको, सत्रौँ हजारको शहादत र बलिदान गरेको, लाखौँ अङ्गभङ्ग भएको, लाखौँ घरबारविहीन भएको र अरबौँको भौतिक क्षति गुमाएर विशाल बनेको त्यस्तो क्रान्तिकारी पार्टी आज खोइ नेपालमा ? भनेर विश्व इतिहासले खोजिरहेको छ । त्यस्तो क्रान्तिकारी पार्टी युगौँसम्म रहने र उद्देश्य पूरा गर्दै जाने हुनुपर्ने होइन र ? खोइ त्यो पार्टी अहिले ? त्यो पार्टी नेकपा हो ?
यसर्थ, उनी अब पुष्पकमल र प्रचण्ड होइनन् लेनिनले सरापेको नेपाली काउत्स्की भइसकेका छन् । ‘फूल होइन भने ओइलाउँदैन, ओइलाउँदैन भने फूल होइन’ भन्ने महान् साहित्यकार विलियम शेक्सपियरले भनेजस्तो राजनीतिक पुष्पकमल पछिल्लो कालखण्डमा ओइलाइसकेका छन् । प्रचण्ड अहिले नवउदारवादी बजारको प्लास्टिकको पुष्प भएका छन् । उनको २०७४ सालसम्मको क्रान्तिकारी वासना र रङ्ग अहिले उडिसकेको छ । अब ओइलाएर घुर्मैलो र बेरङ्ग भएका पुष्पकमललाई कसैले टिप्ने र सम्झाउने अवस्था छैन । उनको प्रचण्ड क्रान्तिकारी छविको राप र ताप अब मधुरो, मलिन भइसकेको छ । उनी चढेर उचाइमा पुगेको राजनीतिक भ¥याङबाटै बजारिएर अहिले उनी निस्तेज भइसकेका छन् ।